चीनले वुहानमा फैलिएको कोरोना भाइरस कसरी नियन्त्रण गर्‍याे ? (भिडियोसहित) – Saurahaonline.com
चीनले वुहानमा फैलिएको कोरोना भाइरस कसरी नियन्त्रण गर्‍याे ? (भिडियोसहित)
एजेन्सी : चीनको हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा डिसेम्बरमा सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्म १८७ देशमा फैलिएको छ । कोरोनाका कारण १३ हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ भने तीन लाखभन्दा धेरै संक्रमित बनेका छन् ।
सुरुमा चीनको वुहानमा फैलिएको भाइरसको संक्रमण पछिल्लो दुई हप्तामा चीनबाहिर धेरै र चीनमा कम देखिन थालेको छ । अहिले इटली, अमेरिका, जर्मनी र इरानलगायतका देशमा यो भाइरसले आतंक मच्चाएको छ ।
चीनको वुहानमा पहिलो पटक जनवरी ९ मा संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि मात्र किटको विकास गरेर चीनले उपचार थालेको थियो । जनवरी २३ सम्म पुग्दा संक्रमित बढ्न थालेपछि चीनले वुहान सहर नै लकडाउन गरेको थियो ।
यो कुनै जाति, भाषा, राजनीति वा अन्य कुनै समुदायमा केन्द्रित थिएन । तर प्रतिबन्धलाई पश्चिमाहरुले मानव अधिकारवादको नाममा चीनको आलोचना गरे । चीनले लकडाउन गरेरै संक्रमणलाई अन्य प्रान्तमा फैलिनबाट रोकेको थियो ।
मार्च १० मा आइपुग्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले वुहानमा भ्रमण गरेपछि अस्थायी अस्पताल बन्द भए । यसपछि कोरोनाविरुद्ध चिनियाँ कदमको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै स्वागत भयो ।
मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउने पश्चिमा देशमा अहिले चीनले सहयोग गरिरहेको छ । चीनको वुहान वा अन्य राज्यमा अत्यन्तै थोरै मात्र नयाँ संक्रमण देखिएको छ ।
हेर्नुस् भिडियो चीनले कसरी रोक्यो भाइरसको संक्रमण ?
चीनले कसरी गर्यो कोरोना भाइरसको नियन्त्रण ?
Gepostet von Sauraha online am Montag, 23. März 2020